ပို့ကုန်တင်ပို့မှု - Yuyao Jera Line Fitting Co. , Ltd.
ကျွန်ုပ်တို့ဂရုစိုက်သည်မှာကုန်ပစ္စည်းများ၏အရည်အသွေးသာမကတင်ပို့ပြီးနောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အခြေအနေနှင့်တတိယအကြိမ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် LCL သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများသည်နောက်ဆုံးသွားမည့်နေရာမရောက်မီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများစွာရှိကောင်းရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏အထုပ်အပိုးစနစ်သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွင်းကုန်ပစ္စည်းများပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်အထုပ်သည်လုံလောက်မှုရှိကြောင်းသေချာစေနိုင်သည်။
1.high- အရည်အသွေး Carton ။ ဤနည်းလမ်းသည်များသောအားဖြင့်ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ကေဘယ်၊ ပေါ့ပ်ကေဘယ်လ်ညှပ်၊ ဖိုင်ဘာအော့ပတစ်ဖြန့်ဖြူးသေတ္တာများစသည့်ပေါ့ပါးသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုသည်။
2. အရည်အသွေးမြင့်ပုံးနှင့်အိတ်ပါသောအိတ်။ သံမဏိကြိုးနှင့်သံမဏိကြိုးများ၊ အလယ်အလတ်ဗို့အားနှင့်ဗို့အားမြင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ သံမဏိတိုင်တိုင်သို့မဟုတ်ကွင်းခတ်များကဲ့သို့သောလေးလံသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရာတွင်ဤနည်းလမ်းသည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
3. Customized သစ်သား pallets ။ အချို့သောဖောက်သည်များသည် LCL သို့မဟုတ် FCL တွင်လုပ်သောအခါသူတို့၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ဆောင်ရန်အတွက်ပိုက်ဆံတောင်းကြသည်။ ဤနည်းလမ်းသည်အနိမ့်ဖြစ်သော ABC cable ကြိုးတပ်ဆင်ခြင်း၊ insulator တွင်လည်းထိုးထားသည့် connector များ၊ cable lugs, FTTH cable ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစသဖြင့်ပေါ့ပါးသောထုတ်ကုန်များကိုထုပ်ပိုးရာတွင်အသုံးပြုသည်။
4. သစ်သားသေတ္တာများ။ အပြင်းထန်ဆုံးသတ္တုသတ္တုများပုံသွန်းလောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အတု fittings များအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော socket မျက်စိ, clevis, ဘောလုံးကိုမျက်စိကောင်လေး grips စသည်တို့။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။ သင်သည်အရည်အသွေးပြည့်ဝသောအမြန်နှုန်း၊ အမြန်ဆုံးပို့ဆောင်ခြင်းနှင့် Jera မှကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုတို့ဖြင့် FTTX ထုတ်ကုန်များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအမျိုးမျိုးကိုရရှိလိမ့်မည်။